कोरोना भाइ’रसलाई अ’ल्कोहलले एक मिनेटमै मा’र्न सक्छ - हाम्रो देश
कोरोना भाइ’रसलाई अ’ल्कोहलले एक मिनेटमै मा’र्न सक्छ
चीनबाट फैलिएको कोरोना भा’इरसले विश्वलाई नै आ’तंकित बनाइरहेको छ। चीनमा मात्र कम्तिमा १३ सय मानिसको कोरोना भाइरस संक्रम’णका कारण मृ’त्यु भइसकेको छ भने ४५ हजारभन्दा धेरै संक्र’मित भएका छन्।यसरी विश्वभर यो रह’स्यमयी भाइर’सले मानवमाथि ग’म्भीर सं*कट उत्पन्न हुँदा वैज्ञानिकहरु यो भाइ’रस नियन्त्रणबारे खोज अध्ययनमा लागेका छन्।
यहीबीचमा जर्मनीका दुईवटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले कोरोना भा*इरसको आयुबारे एक तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनीहरुले कोरोना भा*इरस ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा कमजोर हुने तथ्य पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरुले तापक्रम बढेसँगै यो भाइ*रस कमजोर हुने दावी गरेका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरुले अल्कोहलले यो भाइरसलाई एक मिनेटमै मा*र्नेसमेत बताएका छन्। साथै डिसइन्फेक्टेट गरे यो भाइ*रस ३० सेकेण्डमै म’र्ने जनाइएको छ।यो तथ्यले कोरोना भा’इरसविरुद्धको लडा’ईँमा सफलता पाउन सकिने विश्वास अनुसन्धानकर्ताहरु दाबि गरेको अन्तरार्षट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यो पनि कोरोनाको शंका लाग्यो ? परिक्षण गर्न पाईदैन !
काठमाडौं । नेपालमै बसेका कुनै नागरिकले कारोना भाइरसको शंका लागेर परिक्षण गर्न चाहेमा तत्काल कोरोना भाइरस परिक्षण गर्न पाउने छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परिक्षणका लागि बनाएको मापदण्ड अनुरुप कारोना परिक्षणका लागि उच्च ज्वरो आएको र चीनवाट फर्किएको हुनुपर्ने छ ।
‘हामीले चीनवाट फर्किएकालाई मात्रै कोरोना भाइरस परिक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । नेपालमै बसेकाले कोरोना परिक्षण गर्न पर्दैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालय एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । नेपालमा कोरानाको कुनै संक्रमण नभएको दावी गर्दै ति अधिकारीले चीनवाट आएकाहरुलाई मात्रै परिक्षणको व्यवस्था गरेको बताए । कोरोना भाइरसको परिक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा हुने गरेको छ ।
वुहानवाट फर्किएकालाई परिवारका सदस्यले १४ दिनसम्म भेटन नपाउने चीनको वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्न शनिबार दिउँसो २ ः ४५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चीनको वुहान जाने भएको छ।३ पाइलट, ६ क्याबिन क्रु, २ इन्जिनियर, १–१ जना फ्लाइट डिस्प्याचर र लोडमास्टरसहित नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहने छन् ।
वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई लिएर जहाज आइतबार बिहान २ः१५ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । विभानस्थलमा अवतरण गरेपछि ति विद्यार्थीलाई सिधै खरीपाटी लगिनेछ । खरीपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ति विद्यार्थीलाई १४ दिनसम्म राखिने भएको छ।
ति विद्यार्थीको विभिन्न परिक्षण गरिने भएको छ भने १४ देखी १७ दिनसम्म उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । १८० विद्यार्थीका लागि ६० कोठा तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने ति विद्यार्थीका कुनै पनि अभिभावकले १४ दिनसम्म उनीहरुलाई भेटन पाउने छैनन् । स्वास्थ्य उपचारसंगै खानाको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भएको छ भने चौविसै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीमो निगरानीमा हुनेछन् । सरकारले ५० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विषेश तालिम दिएर राखेको छ । खरीपाटीका लागि ८६ जना चिकित्सक खटाईने भएको छ ।
चीनको बुहानवाट फैलिएको कोरोना भाइरसवाट अहिलेसम्म १ हजार ३०० को मृत्यु भैसकेको छ । बिहीवार मात्रै चीनको हुबेइ प्रान्तको बुहानमा २४२ जनाको मृत्यु भएको विभिन्न समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । एकै दिन २४२ जनाको मृत्यु अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
बुहानमा मात्र १४ हजार ८ सयमा यसको संक्रमण फैलिएको बताईको छ । नेपालमा चीनवाट फर्किएका २० जनामा कोरोना जाँच गरिएकोमा १ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने १९ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।